How to write a good isikhangiso? - [Ukubonisana kwamazwe ngamazwe]
> How to write a good isikhangiso?
2019-03-01 2019-03-01 Ukubonisana kwamazwe ngamazwe Marketing
How to write a good isikhangiso? : Writing a good isikhangiso
How do you make a good isikhangiso
What are the qualities of a good isikhangiso
Indlela yokubhala isikhangiso esicindezelayo
How to write a good isikhangiso
Indlela engcono kakhulu yokubhala isikhangiso
Ukubhala izinto ezisebenzayo zokuhweba ukubamba iso leklayenti ekuboneni kokuqala njengokuba i-glint kodwa izibonelelo nezinkampani ezinjengokuthi zifake umagazini hhayi nokuthi zizosebenzisa kanjani izincwadi ngokulungiswa.
Akudingeki kube yisisekelo ukuthi iklayenti ilahle yonke imigqa yesaziso; ngakho-ke, umugqa ngamunye kufanele usebenze futhi kufanele uphume umlayezo. Ngakho-ke kubalulekile ukuqamba inkinga ehlakaniphile, kodwa kufanele futhi kube nokutholakala ngokwanele.
11 Amathiphu Alula Ekudaleni Isikhangiso Esiphumelelayo - Ukukhangisa Komphakathi Okubhekiswe
How to write a good isikhangiso? : How do you make a good isikhangiso
Right off the bat, just pertinent and explicit issue ought to be written in the isikhangiso. Some substance authors dread passing up a major opportunity data and compose as much as they can. This will just lack of engagement the clients more and space will be squandered. The composition style ought to be identified with the kind of flier or handout that will be composed.
I-standard yayo ye-perseer yokusebenzisa imigqa yeqaqa phakathi nendawo kukhona ukubekezeka ukuthi bayokuyisebenzisa kusukela kusezingeni kuya phezulu. Ngokuvamile isebenzisa amagama athengisa. Kodwa ngesikhathi esifanayo, le nto kufanele iqondiswe ngokufanele ngokubhekwa phezulu, umzimba phakathi nendawo bese uphela ekugcineni. Ukukhathazeka okuyinhloko kungenziwa njengama-sub-headings, ngesitayela esinamandla sombhalo.
Umzimba olandela i-sub-heading kufanele ukhulume nge-sub-heading kanye nangethuba lokuthi likhonjiswe ngenye indlela engaphansi, ngisho nalabo okugxila kudingeke bahlolwe. Uma kungenzeka ukuthi into ezokhulunywa ngephithi ekhethekile, akufanele kube yizobuchwepheshe kuze kube sengathi lizwakala njengolwazi olungaziwa kumuntu ovamile.
Amathiphu ayishumi ekubhaliseni ukukhangisa Okuqukethwe kukaDavid Ogilvy
How to write a good isikhangiso? : What are the qualities of a good isikhangiso
Ukuphonsela enye inqubo engasetshenziswa. Ukuhlukumeza kuhlanganisa izindaba ezincane eziphelile kuze kube sekupheleni. Bangakwazi noma bangaba nabangane phakathi kwabo. Kungcono uma kwenzeka kungabandakanyeki, ngenxa yokuthi ngeke kudingeke ukuthi i-perseer ibuyele kusiqeshana esedlule ukuze kuqondwe isilwane samanje esibhekene nayo. Lokhu kusebenza kahle uma kunezithombe kulesi sikhangiso futhi ucezu luveza isithombe.
Isithombe se-two-dimensional sishayeke ngaphandle uma amanye amagama akhethwe kahle ewaxoxisana futhi ekhohlisa amaklayenti. Ngokusobala, ngenkathi uphonsa, izihloko ezincane zingasetshenziswa ukuvumela idatha eyisisekelo. Esinye iphuzu okufanele sicatshangelwe yiyona nto noma inhlangano mayelana nokuthi iyiphi into exhomeke kuyo. Cabanga ukuthi leli pheshana likhonjiswe ngenkampani, isitayela sokuqamba kufanele sibe semthethweni.
How to write good ukukhangisa content - SlideShare
How to write a good isikhangiso? : Indlela yokubhala isikhangiso esicindezelayo
Ama-slip-ups wokupelisa kufanele agcinwe ibanga eliqhamukayo kuze kube sezingeni elibi kakhulu. Babonisa ikhwalithi ephansi futhi badlulisela ukwaziswa okubi kakhulu kumakhasimende. Isakhiwo kufanele sikhulume ngokucacile mayelana nomhlangano ohlolwayo. Idatha, inhlanhla kanye nedatha enembile yenza inkolelo yokuthi inhlangano ibuye ibe nezimfanelo ezifanayo.
Impahla yikhiqiza enkulu yokugqugquzela izinhlangano ezithile, ngenxa yezinhlelo eziphansi. Izinto ezinjalo zezinkampani zebhizinisi ngeke zidinge ukwakheka okuningi, nje ukukhonjiswa kwezinto kuzokwenza. Kunalokho umuntu angabhekana nokulinganisa umbhalo, ama-hues, njalonjalo.
Isigaba esilandelayo kufanele sibhale idatha mayelana nabathintana nabo ukuthenga into; iphuzu ngamaphuzu ama-point are off-off. Idatha yokuthintana, indawo yeposi kanye ne-URL yesayithi kufanele iboniswe ngokucacile. Ngokufanayo kufaka phakathi ukuthi ibhizinisi liyavuma yini imali, isheke noma i-Mastercard. Okunye okumele kusetshenzwe nakho yidatha yokuxhumana, evame ukuhlanganiswa ezakhiweni, okumele zithunyelwe. Kunengqondo ukuxhumana nabo ekuhwebeni ngokufanayo ngakho amakhasimende angayilondoloza ukuze kubhekiswe esikhathini esizayo.
Indlela Yokubhala Ukukhangisa Okukhulu Kokukhangisa - I-AdEspresso
How to write a good isikhangiso? : Indlela yokubhala isikhangiso esihle
Ngemuva kokuba izinto zokugcina zakhiwe, kuyithuba elihle lokulihlunga. Ngokuhambisana nesithakazelo sezinto, zifake ohlwini lokubaluleka, ikakhulukazi uma uhlela uhlu ngokubheka ukuthi zonke izinto kufanele zithole umcabango nokucatshangelwa ukuthi zifanelekile.
Kuyinto ehloniphekile yokurekhoda izindlela, eziye zaxhunyaniswa nohlobo ngalunye lwezaziso ezakhiwe. Futhi ngokuqhubekayo ungalondolozi idatha njengalabo amaklayenti agxile kuloluhlobo luni lwezaziso, ukusebenzisa ngendlela efanayo efanayo nanoma nini kumakhasimende afanelanayo. Lokhu kwenza uchungechunge lomsebenzi ozayo.
54 Izibonelo Zokubhala Okuqukethwe, Amathuluzi, Amathiphu, Nezinsiza
How to write a good isikhangiso? : Indlela engcono kakhulu yokubhala isikhangiso
ukumaketha, ukukhangisa, isikhangiso,